नागमणी के हो र किन करोडौ पैसाको खेलवाड हुन्छ ? « Pariwartan Khabar
नागमणी के हो र किन करोडौ पैसाको खेलवाड हुन्छ ?
सर्प यस्तो जीव हो जुन मानिसको लागि सदियौं देखि चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ। सर्पको बारेमा अहिलेसम्म हजारौं खोज अनि अनुसन्धान भइसकेको छ तर पनि अझै यो जीवको सबै रहस्य खुलिसकेको छैन। पौराणिककाल देखिनै सर्पसंग जोडिएका सयौं मान्यता समाजमा फैलिएका छन्। यी मान्यतामा केही अन्धविश्वास पनि नजोडिएका हैनन, जुन सदियौं देखि डरका कारण बन्दै आएका पनि छन्। यहाँ सर्पसंग जोडिएका यस्तै अन्धविश्वासको बारेमा चर्चा हुदैछ ।
समाजमा निकै चलेको मान्यता मध्ये यो पनि एक पर्छ कि कसैले सर्प मारे मर्ने सर्पको आँखामा मार्ने मानिसको तस्बिर रहिरहन्छ, जसलाई चिनेर सर्पको साथी सो मानिसलाई पछ्याइ टोकेर साथीको मृत्युको बदला लिन्छ। सर्पको दिमाग यति पनि विकसित भएको हुदैन जति हामीले यो कथा बनाउँदा प्रयोग गर्छौ। निकै कम बौद्धिकता भएको प्राणीले यस्तो गर्नसक्छ भन्नु विज्ञानको दृष्टीबाट असम्भव देखिन्छ। जीव विज्ञानको अनुसार सर्पले मर्न समयमा एक गन्ध छोड्ने गर्छ जसलाई सुघेँर अन्य सर्प सो ठाँउमा आइपुग्छन्। यसैकारण यो अन्धविश्वास रहन गएको हो की सर्पले आफ्नो साथीको मृत्युको बदला लिन्छ।
हिन्दु धर्ममा सर्पलाई दुध खुवाउने प्रचलन छ, जुन की पुरै गलत हो। सर्प मांसहारी जीव हो। सर्पले चरा, मुसा जस्ता साना-साना प्राणीको सिकार गरि खाने गर्छ। दुध सर्पको प्राकृतिक आहार होइन। न त सर्पले दुधको फाइदा र बेफाइदा छुट्याएर दुध खाने नखाने निर्णय गर्न सक्छ। समातर कोचाए नखाने हैन तर यो बु्द्धिमानी कार्य भने भएन।विणाको धुनमा किन नाँच्छ सर्प? खेल-तमासा देखाउने केही मानिस धुन बजाएर सर्प नचाउने दाबी गर्छन। तर यो पुरै अन्धविश्वास हो किनकी सर्पको कान हुदैन। हावामा हुने ध्वनि तरङ्का सर्पले त्यति ध्यान दिन सक्दैन तर जमिन भित्र वा जमिनको सतहमा हुने कम्पनलाई भने एक विशेष हड्डिको सहयताले पत्ता लगाउँछ। सर्पले विशेष गरि हिडडुल गर्ने वस्तुहरुलाई राम्रो संग देख्न सक्छ।
सर्प नचाउने भन्ने धुन बजाउदा सर्पले सो बाजा चलेको संगै आफ्नो शरिर भने चलाउने गर्छ। तर कुनै धुन सुनेर सर्प नाचेको भने होइन। केही सर्प विषालु हुन्छन्। गर्मी महिनामा सर्प जमिनको सतहमा बढी देखिने गर्छन्। सावधान रहेर सर्पको टोकाइबाट बच्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ।
०३ पुष २०७५, वासिंगटन अमेरिकाको विस्कोन्सिनमा एक परिवारमा यसै वर्षको जुन २६ मा एक शिशुको
जेलभित्रै छिनाले आफ्नो लिंग…जहाँ एक छोरीको बलात्कारी वावुले!!
०३ पुष २०७५, भारत भारतमा एक अभियुक्त बलात्कारले आफ्नै लिंग छिनालेका छन् । आफ्नै छोरी
जहाँ कक्षा ८ मा फेल , बने करोडौँको मालिक २३ बर्षमै !
०३ पुष २०७५, भारत भारतमा एउटा घट्ना भएको छ लुधियाना भन्ने ठाउँमा । केहि कुराहरु
०३ पुष २०७५,काठमाडौैं वि.सं. २०७५ साल पुस ३ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१८ डिसेम्बर १८